Alex Gray, mpanakanto an'ny psychedelia | Famoronana an-tserasera
Psychedelia, raha mijery wikipedia isika dia milaza amintsika izany fiezahana hamolavola ny tontolo anaty ny psyche izay azo heverina ho "psychedelic". Izy io koa dia matetika mifandraika amin'ny zavakanto psychedelic, indrindra ny kanto sary sy mozika, izay nivoatra tamin'ny tapany faharoa tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ity dia fomba iray hanandramana hanaitra ny traikefa niainana ny fiainana psychedelic.
Iray amin'ireo singa malaza indrindra amin'ny fanoherana kolontsaina sy izany afaka jerentsika amin'ny doka, sarimihetsika na mozika miaraka amina fiantsoana ambanin'ny tany. I Alex Gray no niaraka tamin'ireo andian-dahatsorany nandoko an'io psychedelia io ka nahasarika antsika ny lokon'ny asidra sy ny famerimberenan'ny singa sasany toy ireny maso ireny. Zavakanto izay mazàna mampihetsi-po tamin'ny lasa sasany izay nielezan'ny fampiasana psychotropika.
Alex Gray dia iray amin'ireo mpanakanto psychedelic miavaka ary eo amin'ny sanganasany dia miavaka ny lohahevitra mifandraika amin'ny fahafatesana. Naseho eran'izao tontolo izao ny sangan'asany ary ny vondrom-piarahamonina psychedelic iraisam-pirenena dia nahatonga azy ho iray amin'ireo mpitondra tenin'ny zavakanto manan-tantara indrindra
Tsy mila mihoatra ny jereo ny sangan'asany sasany hahitana antokom-pivavahana iraisan'ny besinimaro toy ny maso izay mipetraka amin'ny takelaka sasany.
Manangana koa fandalinana ny olombelona avy ao anaty mba handray izany alohan'ny lohahevitra manjombona kokoa toy ny fahafatesana voalaza etsy ambony.
Mpanakanto izay manandrana mametaka ilay olombelona amin'ny zavatra hafa amin'ny vatany hikarohana an'io saina sy angovo izay mamolavola azy io mankany amin'ireo tsy manam-potoana sy tsy mahomby.
Una mikaroha fahalalana momba ny tena sy ny tena hahafantarana ny toerana tokony hipetrahan'ny tena manoloana an'izao tontolo izao. Gray dia milalao amin'ireo tombontsoany sy fomba fijery rehetra ireo mba hampitombo ny mason'ilay mpijery liana hahafantatra zavatra bebe kokoa momba ny tenany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Alex Gray sy ny psychedelia sary hosodoko